थाहा पाउन सिकाउने रुपचन्द्र विष्ट - Nepal Readers
Home » थाहा पाउन सिकाउने रुपचन्द्र विष्ट
थाहा पाउन सिकाउने रुपचन्द्र विष्ट
एक थाल भात भए पुग्नेमा दुई थाल, दश थाल, सय थाल, हजार थाल भात खोज्छन्, मानिसहरु । आफूलाई मात्र होइन ७ पुस्तालाई पुग्ने धन थुपार्न चाहन्छन् । अर्को पुस्तालाई धन थुपार्नुको कुनै अर्थ छैन । जो जन्मन्छ उसले आफ्नो लागि जोहो गर्ने त प्राकृतिक नियम नै हो नि । तर, यहाँ मानिसहरु पुस्तौंका लागि धन थुपारेर अनावश्यक काम गर्दछन् ।
पंचायत कालमा रुपचन्द विष्टले ‘थाहा’ आन्दोलन सुरु गर्दा म कृषि वैज्ञानिकको काम गर्दथेँ । अर्थात्, त्यतिखेर म गाउँमा खेतीपाती सिकाउने गर्थेँ, विशेष गरेर मुस्ताङमा स्याउ खेती गर्ने काम सिकाउथेँ । त्यतिखेर रुपचन्द्रले राजनीति गर्दा अर्थात् चुनावमा भोट माग्न जाँदा सबैलाई ‘थाहा पाऊ, थाहा पाई’ भनेर ठाडो भाषामा भन्दै हिँड्ने गरेको सुन्थें । उहाँले त्यस्तो कुरा गाउँगाउँमा भन्दै हिँड्ने गर्नुभएको सुनेको र आफैले नै चाहिँ काठमाडौं शहरको भित्ताभित्तामा त्यस्ता कुराहरु लेखिएका देखेको थिएँ । यो आजभन्दा ३५/४० वर्ष पहिलेको कुरो हो । साँच्ची ‘थाहा’ के हो भनेर मनमा प्रश्न चाहिँ उठ्थ्यो । तर, जीवन गुजार्दै गएपछि जीवनमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा त धेरै रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाएँ । मान्छेले जीवनमा धेरै हण्डर ठक्कर पाउँदो रहेछ र त्यसबाट नै उसले ‘थाहा’ पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभवबाट थाहा पाएँ । जीवनमा मान्छेले दुःख र सुख दुबै पाउँदो रहेछ। मैले पनि त्यस्तै अनुभव गरेँ।
यी सबै कुराहरु थाहा पाएपछि मात्र मान्छेलाई ज्ञान हुँदो रहेछ । रुपचन्द्रले यी कुराहरुलाई ‘थाहा’ भित्र राख्नुभएको रहेछ । मैले आफ्नै जीवनको अनुभवबाट के थाहा पाएँ भने मान्छेले वास्तवमा ‘थाहा’ नपाएर नै दुःख पाउँदो रहेछ । रुपचन्द्रले ‘तिमी के हौ, के गर्दैछौ ? थाहा पाऊ’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले ‘सत्य थाहा पाऊ, तब मात्र तिमीलाई राम्रो हुन्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । रुपचन्द्रले मानिसहरुलाई ‘तिमीहरुलाई सत्य कुरा थाहा नै रहेनछन्, त्यसैले असत्यको पछाडि लाग्दै हिँडीरहेछौ’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ ‘तिमी ढाँटी हिँड्छौं, चोरी हिँड्छौ, ठगी हिँड्छौ, तर नतिजामा तिमी आफै ठगिन्छौ । यो कुरा थाहा नपाई तिम्रो दुःखको अन्त्य हुँदैन ।’ भनी सर्वसाधारणलाई ‘यस्तो कुरा थाहा पाऊ’ भन्नुहुन्थ्यो । वास्तवमा उहाँले आफू र जगतबारे थाहा नपाउँदा नै मानिसहरुले दुःख पाएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो । र, यो कुरो सबैले ‘थाहा’ पाउनुपर्छ भन्ने बिचार उहाँको रह्यो । रुपचन्द्रको बिचारको मर्म मैले विज्ञान अध्ययन र कर्म गर्दै जाँदा थाहा पाएँ । मैले विज्ञानमा तत्व ज्ञानबारे बुझ्दै जाँदा मुख्य कुरा त ‘थाहा’ नै त रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ ।
बुद्धले भनेका छन्, ‘ज्ञान भएपछि आनन्द प्राप्त हुन्छ । ज्ञान भएन भने वा अज्ञानी भयो भने दुःख हुन्छ ।’ सुकरातले नै पनि भनेका छन्, ‘ज्ञान नै आनन्द हो ।’ यी कुरा हेर्दै जाँदा मुख्य कुरो त ‘थाहा’ नै त रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भयो । र, मैले टि सर्टहरुमा ‘थाहा’ लेखी लाउन थालेँ, त्यो बेलामा । वास्तवमा त्यो बेलामा पनि मैले रुपचन्द्रलाई भेटेको पनि थिइनं । देखेको समेत पनि थिइनं । उहाँका भनाइहरु पत्रपत्रिकामा आउन थाले । र, मैले उहाँका कुराहरु लिएर आफूमा लागु गराउन प्रयत्न गरेँ । मलाई के लाग्यो भने रुपचन्द्र सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो । सत्य भनेको प्रकृति हो । सत्य भनेको जगत हो । यसबारे थाहा पायौं भने हामी सुख पाउँछौं। मान्छेले आफू के हो भन्ने कुरा प्रश्न गर्दै गयो भने त उत्तर पाइहाल्छ नि । मान्छे ज्ञानको भोको हुनुपर्छ । तर, यहाँ मानिसहरु धनको भोका रहेका छन् । एक थाल भात भए पुग्नेमा दुई थाल, दश थाल, सय थाल, हजार थाल भात खोज्छन्, मानिसहरु । आफूलाई मात्र होइन ७ पुस्तालाई पुग्ने धन थुपार्न चाहन्छन् । अर्को पुस्तालाई धन थुपार्नुको कुनै अर्थ छैन । जो जन्मन्छ उसले आफ्नो लागि जोहो गर्ने त प्राकृतिक नियम नै हो नि । तर, यहाँ मानिसहरु पुस्तौंका लागि धन थुपारेर अनावश्यक काम गर्दछन् ।
रुपचन्द्रले सधैँ ‘गरी खाऊ, ठगी नखाऊ’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको अनुसार ठग्नु भनेको अपराध हो । हामीलाई प्रकृतिले आँखा, कान, नाक, छाला र जिब्रो गरी पाँचवटा इन्द्रीयहरु दिएको छ । तिनीहरुबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने भएकोले तिनीहरुलाई ज्ञान इन्द्रीय अर्थात् ज्ञानेन्द्रीय भनिन्छन् । प्रकृतिले कर्म गर्न अर्थात् खोजी खानका लागि हामीलाई दुई हात दिएको छ । खाना खोज्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउमा जानको लागि हामीलाई प्रकृतिले दुई खुट्टा दिएको छ । त्यस्तै खाना खानको लागि मुख दिइएको छ । संसारमा मुख्य कुरो भनेको तत्व हो । यो कहिल्यै नाश हुँदैन । एउटाबाट अर्कोमा रुपान्तरित मात्र हुन्छ । त्यसैले हामीले खाएको खाना पनि अर्कोमा रुपान्तरित हुने मात्र हो । त्यसको नाश हुँदैन । त्यसैले खाएको खाना रुपान्तरित भइसकेपछि त्यो शरीरबाहिर निस्किनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसको लागि हामीलाई प्रकृतिले मलद्वार दिएको छ । त्यस्तै, वंश निरन्तरताका लागि जनेन्द्रीय दिएको छ । यी कर्म गर्ने कर्मन्द्रीयहरु ‘थाहा पाऊ र कर्म गर’ भन्नुहुन्थ्यो रुपचन्द्र विष्ट । उहाँ गाउँमा किसानहरुकहाँ जानुहुन्थ्यो र मल बोकेको ठाउँमा गई मल बोकी सघाउनुहुन्थ्यो, विउ लगाउँदै गरेको ठाउँमा गई विउ लगाई सघाउनुहुन्थ्यो । उहाँले किसानहरुलाई राम्रो कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो । राम्रो गर्नेलाई राम्रो ग-यौ भनी उहाँ प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो । जो काम नगरी तास खेलेर बस्छ, त्यस्तालाई उहाँ ‘ए भाते हो ! ठग हो ! खवरदार !’ भनी चुट्नु पनि हुन्थ्यो ।
त्यो समयमा रुपचन्द्रले श्रमको मूल्य दिइनुपर्छ भनी पर्चा निकाल्नुहुन्थ्यो । चुनावको बेला त्यो पर्चालाई उहाँले २५/२५ पैसा लिई वितरण गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले पर्चा वितरण गर्दा ‘मैले पढ्नको लागि तिमीलाई दिएको हो । यसमा श्रमको मूल्य परेको छ । तिमीले त्यो मूल्य तिर्नुपर्छ ।’ भन्नुहुन्थ्यो र पैसा लिनुहुन्थ्यो । उहाँ श्रमजीविहरुकहाँ जानुहुन्थ्यो, श्रम गर्नुहुन्थ्यो र उनीहरुलाई श्रम गरेकोमा स्यावासी दिनुहुन्थ्यो । कामको ढङ्ग नपुर्याउँदा उहाँ श्रमिकहरुलाई ‘भाते ! त्यसरी होइन, यसरी हो’ भनी काम गर्दाको ढङ्ग पनि सिकाउनुहुन्थ्यो । ज्ञान दिनुहुन्थ्यो, सिप दिनुहुन्थ्यो । यी सबै कुरा त्यतिखेर मैले सुन्ने गरेको थिएँ । उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेको थिइनं । सुनेकै भरमा उहाँबाट म अत्यन्त प्रभावित भएँ । रुपचन्द्रका कुराहरु सुनेपछि ‘सत्य भनेका यी कुराहरु नै त हुन्’ भन्ने मलाई लाग्यो । उहाँ त्यतिखेरको सदन राष्ट्रिय पंचायतमा ‘भ्रष्टाचार हो ! असत्य हो ! यो राष्ट्र सबैको हो । राष्ट्र चलाउने राजादेखि प्रतिनिधिसम्मको व्यक्तिगत तथा परिवारको सुखका लागि होइन यो । शासन भनेको जनताको सुखका लागि हो । भ्रष्टाचार भनेको अनैतिक काम हो । त्यस्तो नगर !’ भनी कराउनुहुन्थ्यो ।
मलाई के लाग्छ भने सत्य नै विज्ञान हो र विज्ञान भनेकै प्रकृति हो । यसबारे ज्ञान भएपछि नै मान्छेलाई आफू र यस संसारबारे ‘थाहा’ हुन्छ । र, ‘थाहा’ले नै मान्छेलाई अगाडि जान दिशा प्रदान गर्छ । त्यसकारण ‘थाहा’ दर्शन हो । जीवनमा मान्छेले ‘थाहा’ पाउनुपर्ने कुरा असिमित छ । तर, उसले आधारभूत कुरा ‘थाहा’ पाउनु नै पर्छ । म के हुँ ? म कहाँबाट आएँ ? यो प्रकृति के हो ? यो कसरी बन्यो ? दुःख के हो ? यो कसरी आउँछ ? सुख के हो ? यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? आदिबारे उसले थाहा पाउनै पर्छ । ‘थाहा’ दर्शनले यी र यस्ता कुराहरु सिकाउँछ, बुझाउँछ । यति भएपछि शान्ति त आइहाल्यो नि । ‘थाहा’बारे मैले भन्नुपर्ने मुख्य कुरो यही नै हो।
(लेखक ‘थाहा’ आन्दोलनलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई कृषि, पर्यावरण तथा गाउँले जनजीवनमा लागु गर्ने अभियानमा लाग्नुभएका वैज्ञानिक तथा अभियन्ता हुन् ।) –इमूल्यांकन
जुम्लाका किसानहरुलाई यति बेला कालिमार्सी धान भित्र्याउन चटारो